Mipetraha ao amin'ny hotely fisotroana, araraoty ny mpanampy an-trano ary ento ny zanakao!
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Mipetraha ao amin'ny hotely fisotroana, araraoty ny mpanampy an-trano ary ento ny zanakao!
Vaovao Mafana • Vaovao Mafana China • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Mety ho tianao ity hotely ity. Te-hanolotra traikefa hafa anao ny fitantanana. Manentana anao hampiharihary tena amin'ny bara izy io. Ekena ny fanitsakitsaham-bady. Ny trano fandraisam-bahiny koa dia manana mpitsabo mpanampy mahay be, rehefa hariva ny hariva, hametraka ny zanakao. Rehefa dinihina tokoa, ity Hotely ao Beijing ity dia fianakaviana mahafinaritra.
Rehefa miala amin'ny hotely misy antsika ianao amin'ny faran'ny fialantsasatrao dia tsy hanana fanantenana intsony ianao! Entanina ny fanitsakitsaham-bady.
Niova ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany ny COVID, anisany ny hotely sy hotely, anisan'izany ny indostrian'ny fandraisam-bahiny iray manontolo.
Ary ahoana ny amin'ny fitrandrahana kely ao amin'ny trano fisotroana hotely. Ento ny zanakao fa mety ny manitsakitsa-bady. Any Chine ihany no mety hitrangan'izany, sa very tamin'ny fandikan-teny ity?
Miaraka amin'ny karazana taona niaretantsika rehetra manerantany, indraindray ny media sosialy dia mety hitsoaka izay ilaintsika rehetra amin'ny faran'ny andro.
COVID dia nanova ny indostrian'ny fandraisam-bahiny. Iza no milaza fa ny media sosialy dia tsy tena mahasoa na inona na inona afa-tsy ireo izay maniry ny hivarotra ny tenany amin'ny fomba, endrika na endrika?
Nisy namana iray nankany Beijing vao tsy ela akory izay ary nomen'ny hotely an'ity bokikely ity. Sarobidy izany. Mitahiry izany izy ary mamaky azy isaky ny mila fihomehezana tsara izy. Mazava ho azy fa nadika mivantana izy io, isaky ny teny, avy amin'ny Mandarin ka hatramin'ny anglisy.
Hampiandry anao any amin'ny seranam-piaramanidina ny solontenanay. Ny bisy mankamin'ny trano fandraisam-bahiny dia mihazakazaka manamorona ny morontsiraka. Tsy ho ela ianao dia hahatsapa fahafinaretana amin'ny rano mandalo. Ho fantatrao fa efa manakaiky ny trano fandraisam-bahiny ianao, satria hitety ny sisin-drano. Miandry anao ao amin'ny efitrano fidirana ny mpitantana. Miezaka ny manao firaisana amin'ny vahiny vaovao foana izy.
Hotely ho an'ny fianakaviana ity, ka tongasoa tokoa ny ankizy. Mazava ho azy fa faly foana isika manaiky ny fanitsakitsaham-bady. Ny mpitsabo mpanampy mahay dia misy amin'ny hariva hametraka ny zanakao. Ny vahiny dia asaina hikoropaka ao anaty bara ary hampiharihary tena amin'ny hafa. Aza hadino anefa fa tsy mahazo miteraka ao amin'ny bara ny vehivavy. Mandamina lalao ara-tsosialy izahay, ka tsy misy vahiny navela irery hiara-milalao amin'izy ireo.
Ny menusinay dia nofidina tsara mba ho tsotra sy tsy mahasarika. Amin'ny sakafo hariva dia hiparitaka avy eo amin'ny latabatra ka hatrany amin'ny latabatra ny quartet-nay ary hiaraka aminao izahay.
Ny efitrano rehetra dia misy toerana tsara ho an'ny faritra manokana. Amin'ny ririnina dia mafana daholo ny efi-trano rehetra. Ny efitrano tsirairay dia misy lavarangana manolotra fahitana amin'ny vetaveta miavaka! Tsy hanelingelina ny tabataban'ny fifamoivoizana ianao satria ny mpandeha an-tongotra ihany no mampiasa ny làlana manelanelana ny hotely sy ny farihy.
Ny fandrianao dia namboarina mifanaraka amin'ny fomban-drazana. Raha manana hevitra hafa ianao, azafady miantso ny mpikarakara tokantrano. Araraoty izy azafady. Faly be izy manety ny lobanao, ny blouse ary ny akanjo anatiny. Raha anontaniana izy dia hanery ny patalohanao koa.
Ambonin'izany rehetra izany
Rehefa mandao anay amin'ny faran'ny fialantsasatrao ianao dia tsy hanana fanantenana. Ho sahirana ianao hanadino azy.
Ka, manomana ny anao ve ianao dia nankany Beijing?